Shir Balaaran oo looga soo horjeedo Maamul Goboleedka Jubbaland oo ka dhacey Melbourne Australia – idalenews.com
Waxaa magaaladda Melbourne ee dalka Australia ka dhacey shir balaaran oo ay ka soo qayb galeen dhamaan qeybaha kala duwan ee Beelaha Digil iyo Mirifle sida Madaxda Jaaliyadda Digil-Mirifle ee dalka Australia , culumau-diinka, haweenka, aqoonyahanda, wax-garadka, iyo dhalinyarada, kaasoo si weyn loogu qaadacey ku dhawaaqida maamulka Jubbaland isla markaasna sheegay iney u arkaan mid aan ku dhisneyn rabitaanka shacabka iyo boob lagu haayo deegaanada Beelaha Digil iyo Mirifle Gaar ahaan Jubooyinka iyo Gedo
Kulankaas ayaa ka soo qeyb-galayaashu tilmaameen in doorasahada Axmed Madoobe iyo Sheegada Barre Hiiraale labaduba yihiin waxba kama jiraan. waxayna gabagabadii shirka soo saareen aragtidooda ku aadan doorashada & sheegashada Jubbaland:-
Inuu shirka kismaayo ka socday iyo doorashaduba ahaayeen kuwa ay ka dambeeyaan shaqsiyaad dano gaaar leh isla markaasna u adeegayaan dowladdo shisheeya.
Inuusan shirka Kismaayo aheyn mid waafaqsan sharciga iyo Dastuurka dalka u degsan, dowlada federaalka Soomaaliyana lagala tashan maamulka shirka iyo go’aanadiisaba.
Inuu ahaa waxii ka soo baxey shirkaasi iyo doorashaduba mid aan loo dhameyn isla markaasna ku dhisan nin jecleysi, eex iyo sadbuursi.
In la hareer marey rabitaanka dadka dhabta ah ee deegaanada labada Jubbo iyo Gedo ka soo jeeda, balse dad aan deegaanka u dhalan oo taageero ka helaayo dalal shisheeye ay afduubteen woodii shacabka goboladaasi .
Ugu dambeyntii shirku ugu baaqay dowlad federaalka iyo dalka IGAD gaar ahaan kuwa safka hore in wax ka qabtaan xaalada Jubooyinka iyo Gedo taasoo khatar wayn galin karto nabadgalyada, deganaashaha iyo xisiloonida gobolkaas, iyo guud ahaan dalka.
Hadabba, waxaan ku baaqaynaa: –
In Sheekh Axmed Madoobe & Barre Aadan Shire Hiiraale iyo taageerayaashooa ka fiirsadaan, kana noqdaan sheegadooda ku aadan labada jubbo iyo Gedo
In aan soo dhoweyneyno go’aanka dowlada ee ahaa inaan shirkaasi loo dhameyn waxii halkaasi ka soo baxeyna yihiin mid sharci daro ah.
In dowladaha dalalka dariska ah iyo kuwa shisheeyaba faraha kala baxaan arrimaha gudaha dalka Soomaaliya, dowlada Soomaaliya lagala shaqeeyo nabadgelyada iyo maamul u sameynta deegaanada Jubooyinka iyo Gedo iyo Guud ahaan dalka Soomaaliya.
In Dowladda Soomaaliya ka shaqeyso dhameynta dhibaatada goboladaas ka jirta, talada iyo aayaha deegaanadaasina loo daayaa dadka deegaanka, dowladuna xil iska saarto deegaanada jubooyinka iyo Gedo in gacanta dadka deegaanka u dhashey dib ugu soo celin lahayd.
Jaaliyadda Digil-Mirifle Soomaaliya ee Australia waxay si wadajir ah u taageeraysaa gogasha Baydhabo lagu soo dhisayo dowladd goboleedka koonfurta Soomaaliya oo ka kooban 6 gobol (Bay, Jubada Hoose, Shabeelada Hoose, Jubada Dhexe, Gedo iyo Bakool).
Jaaliyada Digil & Mirifle ee Melbourne, Australia